Myanmar to launch non-landing sightseeing flight tour in December | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar to launch non-landing sightseeing flight tour in December
Myanmar to launch non-landing sightseeing flight tour in December
The Ministry of Hotels and Tourism is planning to launch non-landing sightseeing flight tours as an attempt to initiate the relaunch of the tourism industry halted by the COVID-19.
Non-landing sightseeing flight tours will be launched in the first week of December, the sightseeing cruise tours in the river in the second week of December, and inland tours and voyage in the last week of December in accordance with the standards and rules of the Ministry of Health and Sports, and the Ministry of Transport and Communications.
The Ministry of Hotels and Tourism has encouraged the Myanmar Tourism Federation and its related organizations to prepare for the tours as it is trying to revive the nearly stopped industry due to the COVID-19 pandemic.
Myanmar targeted to receive over five million tourists in 2020 for the first time and was on the track to its target until the pandemic has halted the global tourism business.
ကိုဗစ်ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည့် မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ်ငန်း ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေး ကနဦးကြိုးပမ်း မှု အဖြစ် အပျော်စီးလေယာဉ် ခရီးစဉ် အပါအဝင် ခရီးစဉ်အမျိုးအစား လေးခု ကို ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း စတင်နိုင်ရန် လျာထား ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ပထမ ပတ်တွင် အပျော်စီးလေယာဉ် ခရီးစဉ် ( Non Landing Sightseeing Flight Tour )ကိုလည်းကောင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယ ပတ်တွင်မြစ်တွင်း သင်္ဘောခရီးစဉ်များကို လည်ကောင်း၊ ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်တွင် ကုန်းတွင်း ယာဉ်တန်း နှင့် အဏ္ဏဝါ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို လည်ကောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ သတ်မှတ် ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ အပေါ်မူတည် ကာ ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွား လုပ် ငန်းသည် လုံးဝနီးပါးရပ်ဆိုင်းသွားရပြီး ခရီးသွား လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် ယခု ခရီးစဉ်များကို စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ညီနောင် အသင်း များအနေဖြင့် ယခုခရီးစဉ်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် နှင့် ခရီးစဉ်များ ဖြစ်မြောက် ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ရန် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးထားသည်။
Previous articleMyanmar’s Foreign Direct Investment Outlook after Daw Aung San Suu Kyi winsasecond term in the country’s elections
Next articleLocal gold prices reflect global gold prices